सीको भ्रमणमा भारतीय चासो - नेपालबहस
गृहपृष्ठ समाचार राजनीति सीको भ्रमणमा भारतीय चासो
सीको भ्रमणमा भारतीय चासो
२३ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आउने तय भएको छ । हिजो मात्र सरकारले यसबारे औपचारिक रुपमै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई आफ्नो कार्यकालकै सबैभन्दा ठूलो उपलव्धिका रुपमा प्रचार गर्न थालिसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतार्थ सरकारले ठाउँ ठाउँमा स्वागतद्वार बनाएको छ ।
साथै सीको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिन नेपाल सरकारले स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागत गर्न विमास्थल पठाउने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले बताएका छन् ।
यसअघि सन् १९९६ मा तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ जमिन नेपाल आएका थिए। त्यसबेला नेपालमा राजतन्त्र थियो। गणतन्त्र आएपछि सन् २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ अन्यन्त छोटो समयका लागि नेपाल आएका थिए।
त्यसपछि पहिलो पटक राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएको नेपाल सरकारका गतिविधिलाई अर्काे छिमेकी भारतले मिहिन रुपले नियाली रहेको छ ।
नेपाल आउनु अघि भारतको चेन्नाई पुग्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको कार्यतालिका रहेको छ । भारतबाट फर्कने क्रममा नेपाल आउने तयारी गरेको राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला के कस्तो सन्धि सम्झौता हुने भन्ने विषयमा भारतीय पक्षले चासो राखेका छन् ।
अघिल्लो लेखसीको स्वागतमा नक्कलीपन
अर्को लेखमालपोत कार्यालयका प्रमुख यौनकाण्डमा पक्राउ
बजेट अधिवेशन अन्त्य : कांग्रेसको आपत्ति, सभामुख बेखबर !
शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता
राष्ट्रपतिद्वारा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटघाट
जनतालाई कोरोनाको त्रास, शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको रात्रीभोज